တာချီလိတ်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားသည့် လိုင်စင်ရှိ မော်တော်ကားအား ငါးရက်အကြာတွင် ပိုင်ရှင်ထံ ဖုန်းဖြင့် မက်ဆေ့(SMS)ပို့၍ ပြန်ပေး | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တာချီလိတ်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားသည့် လိုင်စင်ရှိ မော်တော်ကားအား ငါးရက်အကြာတွင် ပိုင်ရှင်ထံ ဖုန်းဖြင့် မက်ဆေ့(SMS)ပို့၍ ပြန်ပေး
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ တာချီလိတ်မြို့ရှိ ပါဆတ်ကားလေးကွင်းအနီး လူစည်ကားရာနေရာတွင် သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းကက ဈေးဆင်းဝယ်စဉ် ခိုးယူခံလိုက်ရသည့် ကားအား သြဂုတ်လ (၁၈)ရက်နေ့ နံနက် နှစ်နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင် ခိုးယူသူက မယ်ယန်းဂိတ်အနီး၌ ပြန်ထားပေးသွားပြီး ပိုင်ရှင်ထံ ဖုန်းမက်ဆေ့(SMS)ပို့၍ အကြောင်းကြားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ ည နှစ်နာရီခွဲလောက်က ပြန်ရတယ်ခင်ဗျ။ မက်ဆေ့ပို့လာတယ် အစကတော့ (၂၁)ခေါက်လောက် Question Mark (????)တွေပို့ပြီး နောက်နေတာ။ မက်ဆေ့ပို့လိုက်။ ဖုန်းဆက်လိုက်နဲ့ ဆယ်နာရီခွဲကနေ အဲလိုလုပ်နေတာ။ ကျွန်တော်လည်း ကားပျောက်တော့ စိတ်ညစ်နေတာနဲ့ ဘာမှလည်းမပြောချင်တာနဲ့ စာတစ်ကြောင်းပဲ ပို့လိုက်တယ်။ ဘာပြောချင်တာလဲပေါ့။ နောက်တစ်နာရီခွဲလောက်ကျတော့ နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ထပ်ခေါ်ပြန်ရော။ အဲဒီမှာ အသံပိတ်ပြီးထားလိုက်တယ်။ တရေးနိုး ထကြည့်တော့မှ မက်ဆေ့ပို့ထားတာ တွေ့တယ်။ ကားကိုလာယူပါပေါ့။ မယ်ယန်းဂိတ်နားမှာထားမယ်။ ကားသော့ကို စပယ်ယာဘီးရဲ့ အပေါ်မှာ ချိတ်ထားပေးတာပေါ့”ဟု ကားပိုင်ရှင် ကိုအောင်ကျော်ခန့်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ မော်တော်ယာဉ်မှာ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ထားသည့်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တာချီလိတ်မြို့မ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော် ဒီကိစ္စအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ကားရတော့ ရဲစခန်းကိုမောင်းသွားပြီး ရဲစခန်းမှာ မနက်မိုးလင်းထိ သူတို့မေးတာတွေ ဖြေပြီးပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ ရေကြီးနေတော့ မနက်ဖြန်မှ ဆက်လုပ်ရမယ်”ဟု ကိုအောင်ကျော်ခန့်က ပြောသည်။
သြဂုတ်လ(၁၄)ရက်နေ့ နေ့လယ်(၂း၄၀)နာရီဝန်းကျင်က တာချီလိတ်မြို့ ပါဆတ်ကားလေးကွင်းအနီးရှိ ရွှေသရဖူမီနီမတ်တွင် အအေးနှင့်မုန့် ဆင်းဝယ်စဉ် မော်တော်ယာဉ်အား သော့တန်းလန်းဖြင့် စက်နှိုး ထားခဲ့သည့် ကားမှာ ငါးမိနစ်ခန့်အတွင်း ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျး)၊ တာခြီလိတျမွို့ရှိ ပါဆတျကားလေးကှငျးအနီး လူစညျကားရာနရောတှငျ သွဂုတျလ (၁၄) ရကျနေ့ နလေ့ယျပိုငျးကက ဈေးဆငျးဝယျစဉျ ခိုးယူခံလိုကျရသညျ့ ကားအား သွဂုတျလ (၁၈)ရကျနေ့ နံနကျ နှဈနာရီခှဲဝနျးကငျြတှငျ ခိုးယူသူက မယျယနျးဂိတျအနီး၌ ပွနျထားပေးသှားပွီး ပိုငျရှငျထံ ဖုနျးမကျဆေ့(SMS)ပို့၍ အကွောငျးကွားပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“ ည နှဈနာရီခှဲလောကျက ပွနျရတယျခငျဗြ။ မကျဆပေို့လာတယျ အစကတော့ (၂၁)ခေါကျလောကျ Question Mark (????)တှပေို့ပွီး နောကျနတော။ မကျဆပေို့လိုကျ။ ဖုနျးဆကျလိုကျနဲ့ ဆယျနာရီခှဲကနေ အဲလိုလုပျနတော။ ကြှနျတျောလညျး ကားပြောကျတော့ စိတျညဈနတောနဲ့ ဘာမှလညျးမပွောခငျြတာနဲ့ စာတဈကွောငျးပဲ ပို့လိုကျတယျ။ ဘာပွောခငျြတာလဲပေါ့။ နောကျတဈနာရီခှဲလောကျကတြော့ နောကျထပျဖုနျးတဈလုံးနဲ့ ထပျချေါပွနျရော။ အဲဒီမှာ အသံပိတျပွီးထားလိုကျတယျ။ တရေးနိုး ထကွညျ့တော့မှ မကျဆပေို့ထားတာ တှတေ့ယျ။ ကားကိုလာယူပါပေါ့။ မယျယနျးဂိတျနားမှာထားမယျ။ ကားသော့ကို စပယျယာဘီးရဲ့ အပျေါမှာ ခြိတျထားပေးတာပေါ့”ဟု ကားပိုငျရှငျ ကိုအောငျကြျောခနျ့က တာခြီလိတျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါ မျောတျောယာဉျမှာ ယာဉျမှတျပုံတငျလုပျထားသညျ့ယာဉျဖွဈပွီး ယာဉျပြောကျဆုံးမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ တာခြီလိတျမွို့မ ရဲစခနျးတှငျ အမှုဖှငျ့ထားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ကြှနျတျော ဒီကိစ်စအမှုဖှငျ့ထားပါတယျ။ ကြှနျတျော ဒီနကေ့ားရတော့ ရဲစခနျးကိုမောငျးသှားပွီး ရဲစခနျးမှာ မနကျမိုးလငျးထိ သူတို့မေးတာတှေ ဖွပွေီးပါပွီ။ ဒီနတေ့ော့ ရကွေီးနတေော့ မနကျဖွနျမှ ဆကျလုပျရမယျ”ဟု ကိုအောငျကြျောခနျ့က ပွောသညျ။
သွဂုတျလ(၁၄)ရကျနေ့ နလေ့ယျ(၂း၄၀)နာရီဝနျးကငျြက တာခြီလိတျမွို့ ပါဆတျကားလေးကှငျးအနီးရှိ ရှသေရဖူမီနီမတျတှငျ အအေးနှငျ့မုနျ့ ဆငျးဝယျစဉျ မျောတျောယာဉျအား သော့တနျးလနျးဖွငျ့ စကျနှိုး ထားခဲ့သညျ့ ကားမှာ ငါးမိနဈခနျ့အတှငျး ပြောကျဆုံးသှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။